Momba ANAY - BullyingCanada
/ Momba anay
BullyingCanada Mahatonga ny fahasamihafana
Mendrika iadiana ny Tanorantsika
BullyingCanada no hany fiantrana nasionaly miady amin'ny fampijaliana natokana ho amin'ny famoronana hoavy mamiratra kokoa ho an'ny tanora ampijaliana. Ny nanomboka tamin'ny maha-tranonkala noforonin'ny tanora mba hanangonana ankizy ampijaliana sy hanomezana vaovao momba ny fampijaliana—sy ny fomba hampitsaharana!—dia tolotra fanohanana feno 24/7 izao. Amin'ny andro rehetra amin'ny taona, amin'ny fotoana rehetra, ny tanora, ny ray aman-dreny, ny mpanazatra ary ny mpampianatra dia mifandray aminay amin'ny telefaona, SMS, chat an-tserasera, ary mailaka mba hahazoana fanampiana amin'ny fampitsaharana ny fampijaliana. Ny Ekipa Fanohanantsika dia ahitana mpilatsaka an-tsitrapo an-jatony tena voaofana.
Ny maha samy hafa antsika: BullyingCanada mijoro eo anilan'ireo izay manatona fanampiana mandra-pahavitantsika hampitsahatra ny fampijaliana azy ireo. Isaky ny tranganà fampijaliana ataonay dia miresaka amin'ny tanora sy ny ray aman-dreniny izahay; ny mpampijaly sy ny ray aman-dreniny; mpampianatra, mpanazatra, mpanolotsaina mpitari-dalana ary talen-tsekoly; biraon'ny sekoly; polisy eo an-toerana raha misy atahorana ny ain'ny zaza iray; ary ny tolotra ara-tsosialy eo an-toerana mba hahazoana ny torohevitry ny tanora ilainy hositranina. Maharitra roa herinandro ka hatramin'ny herintaona mahery io dingana io.
Manolotra famelabelarana momba ny fampijaliana sy ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra mavitrika amin'ny ezaka manohitra ny fampijaliana ihany koa izahay.
BullyingCanada dia natomboka tamin'ny 17 Desambra 2006 avy amin'i Rob Benn-Frenette, 17 taona, ONB, ary Katie Thompson (Neu) 14 taona rehefa nandeha mivantana ny tranonkala noforoniny. Samy niharan'ny fampijaliana tafahoatra i Rob sy Katie nandritra ny taom-pianarana fototra sy tany amin'ny lise. Nitady fanampiana izy ireo saingy tsy nahita fiantrana na sampan-draharaha sosialy hirotsaka an-tsehatra sy hanakana azy ireo tsy hampijaly azy ireo. Ka namorona izy ireo BullyingCanada manampy ny ankizy mijaly.
BullyingCanada dia nasongadina tamin'ny gazety, gazety, radio, ary fahitalavitra manerana an'i Kanada sy eran'izao tontolo izao amin'ny fiteny maro—toy ny ao amin'ny Globe and Mail, Reader's Digest, Ray aman-dreny androany, sy ny maro hafa. Rob sy Katie dia samy fantatra ampahibemaso imbetsaka noho ny ezaka tsy nitsahatra nataony.
Manangana ny loharanon-karena ilainy fony ankizy,
nitombo ny mpanorina antsika BullyingCanada ho harem-pirenena.
Katie sy Rob no nanangana BullyingCanada tamin'ny taona 2006, raha mbola naharitra izy ireo na dia teo aza ny fampijaliana tafahoatra nataon'izy ireo.
Te-hanome loharanom-pahalalana mihoatra noho ny static, Rob sy Katie dia nisoratra anarana BullyingCanada ho toy ny fiantrana miasa ahafahan'izy ireo manome tolotra mivantana ho an'ireo tanora sahirana.
Laharana fanoratana asa soa
Support Network natomboka
Ny fahafantarana fa tsy manaraka ny ora fiasana ny fampijaliana, BullyingCanada nanangana tsipika fanohanana 24/7/365 mba ahafahan'ny tanora miantso, mifampiresaka, mailaka, na mandefa SMS miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo efa voaofana mba hahazoana ny fanampiana ilainy.
Hihaona amin'ireo Mpanorina
Mitondra traikefa sy fahaiza-manao mandritra ny androm-piainany amin'ny fanompoana ireo tanora ampijaliana sy ny fianakaviany manerana ny firenena.
14 taona i Katie fony izy sy Rob nihaona tamin’ny namany iray. I Katie koa dia niharan'ny fampijaliana tafahoatra tamin'izy nihalehibe. Nandrahona ho faty izy isan'andro, nesoina, ary naratra. Tsy nahita fialofana azo antoka tamin'ireo mpampijaly azy izy, dia nahavita ny taom-pianarana faha-9 ary niala tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa.
Mba hanampiana ireo ankizy hafa nampijaliana toa azy ireo dia nanomboka izy sy Rob BullyingCanada amin'ny endrika tranonkala. Tsy nanana traikefa teo aloha tamin'ny fanoherana ny fampijaliana izy fa nitohy ny fampijaliana na dia taorian'ny ady aza BullyingCanada natomboka ny tranokala.
Izy sy Rob dia nizara ny andraikitry ny Talen'ny Co-Executive an'ny BullyingCanada. Raha nanangana tambajotra fanohanana matanjaka i Katie dia nahavita ary nahazo ny mari-pahaizana momba ny sekoly ambaratonga faharoa ao Ontario tamin'ny alàlan'ny fianarana an-tserasera. Avy eo izy dia nahazo diplaoma tao amin'ny St. Lawrence College niaraka tamin'ny mari-pahaizana momba ny psikolojia momba ny heloka bevava sy ny fitondran-tena misy fahasamihafana. Izy koa dia ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) voamarina, toa an'i Rob sy ny rehetra BullyingCanadaMpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Ekipa Fanohanana.
Ny anjara asan'i Katie amin'izao fotoana izao BullyingCanada dia tapa-potoana, mamaly mailaka sy fangatahana mivantana amin'ny chat avy amin'ny ankizy ampijaliana. Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanolotra maro azy dia manao vitsivitsy i Katie BullyingCanada famelabelarana an-tsekoly isan-taona. Mandinika boky mifandray amin'ny fampijaliana sy herisetra koa izy.
Nantsoina hoe Vehivavy an'ny Taona avy amin'ny Antenimieran'ny Varotra Avaratra Perth, faritra misy ny tanàna niaviany, i Katie.
Mpanorina sy Tale Mpanatanteraka
17 taona i Rob tamin'ny 2006 fony izy sy Katie Thompson (Neu) nanomboka BullyingCanada.
Teraka tamin'ny paralysisa ny atidohany, ny diany tsy mahazatra dia nahatonga azy ho lasibatry ny fampijaliana tsy an-kijanona nandritra ny taom-pianarana. Niharan'ny fanararaotana ara-tsaina sy ara-batana izy—anisan'izany ny voadaka, voadona, voatosika, nororany, nanonona anarana, nodorana tamin'ny jiro sigara, ary natsipy teo anoloan'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny fampijaliana tsy misy fitsaharana dia nahatonga azy tsy afaka nifantoka tamin'ny entimodiny, ary niaraka tamin'ny nofy ratsy, ny hatsembohana amin'ny alina ary ny fanafihan-tahotra. Indroa izy no nanandrana namono ny ainy. Nangataka fanampiana izy saingy tsy nahita fampiononana tamin'ny torohevitra an-telefaona tsy fantatra anarana indray mandeha.
Raha tokony ho torotoro izy, dia niantso hery anaty. Tsy tiany hisy ankizy hafa handalo izay niainany, ka niara-niasa tamin’i Katie Neu, 14 taona tamin’izany, izay niharan’ny fampijaliana koa.
Niara-nanangana tranonkala iray izy ireo izay niteraka sampan-draharaham-panohanana naorin'ny tanora nasionaly izay hitondra fanohanana hatrany amin'ny tantaran'ny Kanadiana. Tamin'ny faha-22 taonany, Rob dia nomena ny voninahitra ho mpikambana ao amin'ny Order of New Brunswick.
Telopolo taona mahery izao i Rob dia nanangana fikambanana nasionaly matanjaka, miaraka amin'ny fanohanan'i Katie. Mifandimby mamaly ny antso vonjy izy, mandray sy mampiofana mpilatsaka an-tsitrapo, manao famelabelarana any an-tsekoly ary mitantana ny adidy ara-pitantanana sy fanangonam-bola isan'andro.